भारतीय नम्बरप्लेटको गाडीले ५ सबारीलाई ठक्कर दियो, हल्लनचोक देखि सेदीसम्म मेसो लगाएर कसरी भयो यस्तो ? – Samacharpati Samacharpati भारतीय नम्बरप्लेटको गाडीले ५ सबारीलाई ठक्कर दियो, हल्लनचोक देखि सेदीसम्म मेसो लगाएर कसरी भयो यस्तो ? – Samacharpati
भारतीय नम्बरप्लेटको गाडीले ५ सबारीलाई ठक्कर दियो, हल्लनचोक देखि सेदीसम्म मेसो लगाएर कसरी भयो यस्तो ?
पोखरा, ११ असार । पोखराको हल्लनचोक देखी सेदिसम्म एक भारतिय नम्बर प्लेटको गाडीले जथाभावि रुपमा मोटर साईकलहरुलाई ठक्कर दिई अकल्पनिय दुर्घटना गराएको छ । बुधबार दिउसो गाडी अनियन्त्रीत हुदा ५ वटा सवारी साधन सहित एक पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिई एक गम्भिर र तीन जना सामान्य घाइते भएका छन् ।
बुधबार दिउँसो करिब १ बजेको समयमा एच.आर.०९ एल.०००९ नम्बरको भारतिय गाडीले एक पैदययात्री, एक ट्याक्सि सहित ५ वटा सवारी साधनलाई ठक्कर दिदा एक गम्भिर सहित तीन जना घाइते भएका हुन् । उक्त गाडीको ठक्करबाट पोखरा १८ भकुण्डेका ८३ बर्षीय पद्म बहादुर गुरुङ गम्भिर घाइते भएका हुन् । उनको हाल पोखरा सृजनाचोकमा रहेको मेट्रोसिटी हस्पिटलमा सघन उपचार कक्ष (आइसियू) मा उपचार भईरहेको छ । ग १६ प ९९५९ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार गुरुङको अबस्था गम्भिर रहेको अस्पताल श्रोतले जनाएको छ । गुरुङ चढेको मोटरसाइकल चालक इश्वर नेपालीले चलाएका थिए । उनको समेत मेट्रोसिटिमा उपचार भइरहेको छ ।
भारतिय गाडीको ठक्करबाट पोखरा गगनगौडाका ५२ बर्षीय मुलुल ढकालको समेत मेट्रो सिटिमा उपचार भइरेको छ । भारतिय नम्बर प्लेटको गाडी अनियन्त्रीत हुदा एउटा गाइलाई समेत ठक्कर दिएको कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता डि.एस.पी. राजकुमार केसीले बताउनुभयो । अर्घखाँची घर भई भारत बस्दै आएका अजय बरालले चलाएको भारतिय नम्बर प्लेटको गाडीले जथाभावि ठक्कर दिएको हो । उनले मादक पदार्थ सेवन गरी गाडी चलाएका थिए । गाडी चालक र गाडीलाई वडा प्रहरी कार्यालय बैदमले नियन्त्रणा लिएको कार्यालयका प्रमुख एवं डि.एस.पी. कोमल शाहले जानकारी दिनुभयो । उक्त गाडीले ग १५ प ८६२६ नम्बरको स्कुटर, ग ७ प १३४७ नम्बरको मोटरसाइकल, ग १६ प ९९५९ मोटरसाइकल, ग १३ प १५२ नम्बरको मोटरसाइकल र ग १ ज २७८६ नम्बरको ट्याक्सिलाई ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
गाडि अनियन्त्रित भएको भनिएपनि एक पछि अर्को गर्दै दुर्घट्ना गराउनु चालकको नियत नै खराव रहेको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन् । भारतिय गाडीको दादागिरी पोखरामा नचल्ने उनिहरुको तर्क छ ।
रोल्पा अस्पतालको आइसोलेशनमा रहेका २२ वर्षे युवककाे मृत्यु
इच्छाकामना गाउँपालिकाले सुकुम्वासीका लागि घर निर्माण शुरु